automatically sing off Pfingo — MYSTERY ZILLION
automatically sing off Pfingo
၁ min:ကျော် သွားတာနဲ့ သူ့ အလိုလို sing off:ဖြစ်သွားတယ် ဗျာ။
ဘာဖြစ်လို့လဲ မသိဘူး သိတဲ့သူများ ကူညီဖြေရှင်းပေးပါနော်။
aaronhtoo wrote: »
အော် pfingo တောင် မသိပါလား။ စိတ်ညစ်လိုက်တာနော်...:((:((:((
သူတို့ဆီမှာ တစ်မီနစ် ကျော် ရင် sing off ဖြစ်သွားတယ် ဆိုတာ မပါဘူးဗျ။ ကျွန်တော်ဖတ်ပြီပြီ။
pfingo ဆိုတာက ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ ဘယ်နိုင်ငံ ကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် အဲဒီ pfingo အကောင့် တစ်ခု ၀ယ်ထား ရင်. အဲဒီ အကောင့်နဲ့ ပဲ ဘယ်ဖုန်း ဖြစ်ဖြစ် ခေါ် ပြီးပြော လို့ ရပါတယ် (အင်တာနက်လိုင်းတော့ရှိရမှာပေါ့နော်..).. .pfingo အကောင့်ကိုလည်း. ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ မှာလည်း တဆင့် ၀ယ်လို့ရပါတယ်။ စင်ကာပူမှာ လည်း သ ူငယ်ချင်းရှိရင်.. အဲဒီမှာ လှမ်း၀ယ်ခိုင်းရင်လည်း ၀ယ်လို့ရပါတယ်... သူ့ရဲ့ ဆိုဒ်မှာ လည်း ၀င်ပြီးလေ့လာလို့ရပါတယ်..
Pfingo Software ကိုလိုချင်ရင်တော့ ဒီမှာ ၀င်ပြီး ဒေါင်းလုပ်ချလို့ရပါတယ်.
pfingo ဆိုတာက ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ ဘယ်နိုင်ငံ ကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် အဲဒီ pfingo အကောင့် တစ်ခု ၀ယ်ထား ရင်. အဲဒီ အကောင့်နဲ့ ပဲ ဘယ်ဖုန်း ဖြစ်ဖြစ် ခေါ် ပြီးပြော လို့ ရပါတယ် (အင်တာနက်လိုင်းတော့ရှိရမှာပေါ့နော်..)..mobile phone ဆိုရင်..SMS ပို့လို့လည်း ရပါတယ်.ဒါအပြင် pfingo အချင်းချင်း ဆိုရင်တော့...free ပြောလို့လည်း ရပါတယ်.function တော်တော် များများ လည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်...pfingo အကောင့်ကိုလည်း. ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ မှာလည်း တဆင့် ၀ယ်လို့ရပါတယ်။ စင်ကာပူမှာ လည်း သ ူငယ်ချင်းရှိရင်.. အဲဒီမှာ လှမ်း၀ယ်ခိုင်းရင်လည်း ၀ယ်လို့ရပါတယ်... သူ့ရဲ့ ဆိုဒ်မှာ လည်း ၀င်ပြီးလေ့လာလို့ရပါတယ်..
အမ်.. ကျွန်တော် reply လုပ်တာက ဟိုတစ်ယောက် pfingo ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာကို သိစေချင်ရုံသက်သက်ပေးလိုက်တာကို .. ကိုယ့်ဆရာက.. ကျူပ်ကို အတင်းကြီးလက်လှိျုခိုင်းတယ်.. လူဇိုး..:D:D
ဒါဆိုရင် အကောင့်ကိုပြန်စစ်ကြည့်ဖို့လိုမယ်ထင်ပါတယ် .. အဓိကတော့ ပိုက်ဆံရှိသေးလားပေါ့ ..နောက်ပြီး .. ဗိုင်းရပ်စ် စစ်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ် .. ဖြစ်နိုင်ရင် .. pfingo version နောက်တစ်မျိုးပြောင်းတင်ကြည့်ပါ ..နောက်ပြီး .. software တစ်ခုခုနဲ့ conflict ဖြစ်သွားတာလဲဖြစ်နိုင်တယ် .. Tune Up Tool တစ်ခုခုနဲ့ စက်ကို Run ပေးပါဦး.. ပြီတော့ဘာလဲဆိုတော့ .. တစ်ချို့သော .. Virus program များဟာ .. မှားပြီးတော့လဲပိတ်တတ်ကြတယ် .. အဓိကကတော့ .. Connection ကိုလည်း (ဖုန်းလိုင်းကောင်းမကောင်း) မမေ့သင့်ဘူး .. တစ်ခြား စက်တစ်လုံးမှာရော စမ်းကြည့်ပါဦး... နောက်ပြီး windows ရဲ့ firewall ကလည်း .. phishing blcok ဆိုပြီး ပိတ်ခိုင်းတတ်တယ် .. Firewall ကို ခဏပိတ်ထားလိုက်ပေါ့.. ပြီးတော့ .. နောက် user mode တစ်ခုထဲမှာလည်း Pfingo ကို Run ကြည့်ပါဦး .. ပြီးတော့ .. Pfingo ကို freedom ဘဲဖြစ်ဖြစ် .. U နဲ့ဘဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုခုနဲ့ကျော်ပြီး သုံးကြည့်ပါလားဗျာ..
ဒေါင်းလို့ ရလို့လား.. ကျွန်တော့်တော့ လုပ်တာမရဘူးဖြစ်နေတယ်
အဲဒါ မျိုး ဖြစ်ဖူးပါတယ်.. အဲဒါ ဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတာတော့ သေချာမသိပါဘူး.ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရင်းလေး ကိုတော့ပြောပြပါ့မယ်. Pfingo Beta version ကို..စက်တစ်လုံး. ဒေါင်းလုပ်ချထားပြီးတော့ တခြားစက်မှာ.. အင်စတောလုပ်ပြီး သုံးတာ..အဲဒီ စက်မှာက..အဲဒီလိုပဲ.. 1မိနစ် ပြည့်ရင် sign off ဖြစ်သွားပါတယ်. Beta version ကို တိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုပ်ချထားတဲ့စက်မှာ ကျတော့ မဖြစ်ပါဘူး.. နောက်ပြီး ဘီတာ မဟုတ်ပဲ. 3.1.2 ဆိုရင်လည်း အဲဒီလို မဖြစ်ပါဘူး.. .အဲဒီလိုဖြစ်နေတဲ့.စက်က Pfingo ကို..ပြန်ဖြုတ်ပြစ်လိုက်ပါ... ပြီးမှ.. တခြား ဗားရှင်း ကို..ထည့်ပြီး သုံးကြည့်ပါ..အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်....ဒါမှ မဟုတ်တခြားစက်မှာ အဲဒီ ဗားရှင် းကိုပဲ ထည့်ပြီးသုံးကြည့်ပါ.. ..အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်..တိုက်ရိုက် ဒေါင်းလုပ် ချ ပြီးတော့သုံးကြည့်လိုက်နော်....
ကျွန်တော်သိသလောက်လေး ပြောကြည့်တာပါ.. .. အမှားပါရင်လည်း ခွင့်လွှတ်နော်.....:5::5:
ဒေါင်းလုပ်ဆွဲလို့ရပါတယ် ခင်ဗျာ..အဲဒါ သူ့ရဲ့..မူရင်း ဆိုဒ်က ပါပဲ..။
ဒါက Pfingo 3.1.2 version ပါ..။ ဒါက beta version ပါ. ပြန်ဆွဲကြည့်လိုက်ပါအုံး..
ဆိုဒ်က သိပ်မများပါဘူး 8.5M လောက်ပဲ ရှိတာပါ.. မန္တလေး က ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော့ဆီလာယူလို့ပြောမလို့ပဲ..ကျွန်တော့ဆီမှာ ဒေါင်း ပြီးသားတွေ ရှိပါတယ်...:)
beta လိုချင်တယ်ဗျာ။ အကိုတင်တာ နှစ်ခုလုံးက 3.1.2 တွေကြီးပဲ
ဘီတာ မတင်ပါသေးနဲ့ဦး ဖုန်းခေါ်ဖို့အတွက်ထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲသွားတာရှိသေးပါဘူးဗျာ။ ကျွန်တော်တော့ ၃.၁.၂ ကိုပဲသုံးနေတယ်။ သုံးလို့အဆင်ပြေပါတယ်။ ပိုလဲရိုးရှင်းတယ်ထင်တယ်။
ကိုဝေလင်းမောင် ဖြစ်နေတာက ကွန်နက်ရှင်ကျသွားတာဖြစ်ဖို့များပါတယ်။ နောက်တခုက အကောင့်တခုထဲကိုများ စက်နှစ်လုံးသုံးနေသေးလား။ စစ်ကြည့်လိုက်ပါဦးဗျာ။ :39:
အကောင့်ကို စက်တစ်လုံးထဲ ပဲ သုံးတာပါ။ ကွန်က ကောင်းပါတယ်။ ၁မီနစ် 40 စက်ကန့်လောက်ဆိုရင် sing off ဖြစ်ဖြစ်သွား တာပါ။
ဟုတ်တယ် ဗျာ.. ကျွန်တော် လင့်ထည့်ပေးလိုက်တာ.မှားသွားလို့ပါ.. ပြန်ထည့်ပေးပါမယ်.. Beta အတွက်.. ဒီမှာ သွားယူလိုက်ပါ..ကျွန်တော်လည်း ပြန် ထည့်ပေးမလို့ပဲ..လိုင်းမကောင်းလို့.. ပြန်၀င်မရဘူးဖြစ်နေလို့..နောက်ကျသွားပါတယ်.. တကယ်လို့ MPT လိုင်းနဲ့ ဒေါင်းလုပ်လုပ်တာဆိုရင်.. ဒါမျိုး
တက်လာတယ် ဆိုရင်.. Retry ပြန်ပြန်လုပ်ပေးလိုက်ပါ.. ခဏခဏ ပြန်လုပ်ပေးရင်ရပါတယ်. အဲဒါ လိုင်းကြောင့်ဖြစ်တာပါ... အဲဒီကနေမှ..သွားတာ ဘီတာ အတွက်မရဘူးူ ဖြစ်နေရင်လည်း ဒီက သွားပြီးတော့ New Release Beta Version! ရဲ့ ဘေးနားက Download Now ကို နှိပ်လိုက်ရင် ရပါတယ်..
ရဘူးဗျာ... Problem Loading page တဲ့ ။ စိတ်ညစ်လာပြီဗျာ။
ဒီတစ်ခါ ဆွဲမရဘူးလို့ပြောနဲ့..ကြားချင်၀ူး:107: အဲဟုတ်ပေါင်... မြင်ချင်၀ူး..:14:B-)
pfingo ဌာနကိုဖုန်းဆက်ကြည့်တော့ ပြောတာပဲ
ကျတော်ဆို နှစ်ခုရှိတာ နှစ်ခုလုံး sing off ဖြစ်တယ် နောက်တော့ တစ်ခုဆို ၀င်လို့တောင်မရတော့ဘူး အဲဒါဘာဖြစ်လဲလို့မေးတော့ ..အဲလိုပဲဖြစ်တယ်တယ်ဆိုပဲ
စောင့်ပဲစောင့်ကြည့်ရမယ်တဲ့ ဒါမှမဟုတ် pfingo ဆိုင်မှာ ဖြစ်နေတာကို တင်ပြလို့ရတယ်တဲ့
နောက်တစ်ခုက password ပြောင်းပြီတော့သုံးကြည့်တဲ့
password ပြောင်းရင်လဲ desktop ကို လုံး၀မသုံးပဲ pfingo ဆိုဒ်မှာပဲသွားပြီးတော့ password ပြောင်းပြီးလို့ 15 မိနစ်လောက်နေမှ desktop ကိုပြန်၀င်ကြည့်တဲ့ အဲလိုဆိုလဲပြန်ကောင်းနိုင်တယ်တဲ့ မရရင်တော့စောင့်သာစောင့်တော့
ကျတော်မရတဲ့ဟာဆို2ရက်စောင့်လိုက်ရတယ် ပြီးမှအဆင်ပြေသွားတယ်
ဖြစ်ပုံ က pfingo ဆိုဒ်ကို ၀င်လို့၇တယ်နော်
desktop ဆိုတဲ့ ဖုန်းခေါ်တဲ့ software လေးမှာ၀င်လို့မရဖြစ်တာပါ။
အယ် .. အနော်နဲ့ တူတယ် ... အနော်လဲ ၀င်လို့ မရဖြစ်နေတာ .. တညလုံးပဲ .. အကောင့်၂ ခုရှိတာ တခုက ရပီး တခုက မရဖြစ်နေတာ ... သူများ တွေများ ငါစကား၀ှက် ခိုးပီး .. ပြောနေကြလို့ ၀င်လို့ မရတာလား ပေါ့ .. အဲ့တုန်းက :d.. နောက်တော့ မှ .. ပီဖင်းဂိုး အဲ့လိုကြောင်တတ်မှန်း သိတယ်.. ဒါနဲ့ ..စကားမစပ် ..ကို့အကောင့် သူများသုံးနေတယ် မသုံးနေဖူးဆိုတာ ကော ဘယ်လို သိနိုင်မလဲ ခင်ဗျ :5::5:
pfingo error ပါ။ ကျွန်တော့်ဆီမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ username password နဲ့မရရင် နံပါတ်နဲ့ pin code သုံးပြီး၀င်ကြည့်ပါ။ ရတတ်ပါတယ်။ သူတို့ဘက်က error ဆိုတာသေချာပါတယ်။ ကျွန်တော်တစ်ခါဖြစ်တုန်းက submit ticket တင်ပြီး ၃ ၄ ခါလောက် အတိုက်အခံဖြစ်ပြီးမှ သူတို့ဘက်က ပြန်လုပ်ပေးမှရတာဗျ။ တော်တော်ဆိုးတယ် pfingo က။ မြန်မာပြည်နဲ့အဆင်ပြေလို့သာသုံးနေရတာ။ သူ့ forum ထဲမှာလည်း ၀ုိင်းပြီးဆွမ်းကြီးလောင်းထားကြတာ နည်းတာမဟုတ်ဘူး။
တပြိုင်နက်ထဲ၀င်တာ အကောင့်တခုက ရပီး တခုကမရဘူးးး
၀ါသနာရှင် wrote: »
သူများသုံးနေလာဘာလားတော့မပြောတတ်ဘူး သုံးပြီးတော့ password မပြောင်းသွားရင်တော့ ကိုယ်သိရသေးတာပေါ့ ဘယ် နံပါတ်ကို ခေါ်သွားတယ် ဘယ်လောက်ခေါ်သွားတယ်ဆိုတာကိုလေ
www.pfingo.com web ထဲမှာကြည့်လိုက်ပေါ့ web ၀င်ပြီးတော့ pfingoDESKTOP ထဲကိုသွား အဲဒီထဲက Hot Billing ထဲမှာ view ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်...လေ တိတယ်ဟုတ်... အိုင်လဲအဲလိုပဲသိတယ် :5::5:
... ပြောဦး မယ် 15 ရက်နေ့ည 8 နာရီလောက်ကတောင် ဘာမှမရဖြစ်သွားတယ် မနက်မှပြန်ရတယ် ....
pfingo လည်း ၀န်ဆောင်မှုပေးတဲ့နေရာမှာ MPT နဲ့ နင်လားငါလားပဲနော်။
သူ့နိုင်ငံမှာ ဘယ်လိုများလုပ်စားနေလဲမသိဘူး။ supporting က လည်း ညံ့လိုက်တာပြောမနေနဲ့။
ticket submit လုပ်လိုက်ရင်လည်း အနည်းဆုံး ၂ရက်ကြာတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ဘာမှအကြောင်းမပြန်လို့ email ပို့ပြီးနည်းနည်းကောလိုက်မှ အကြောင်းပြန်တယ်။ အံ့သြတယ်။ နောက်ပြီး ၀င်လို့မရလို့ ticket submit လုပ်ရင် သူတို့ solution က အမြဲပုံသေပဲ အလွတ်တောင်ရနေပြီ။
Pfingo Account အသုံးပြုကြကုန်သော ကိုကို မမ ဦးဦး ဒေါ်ဒေါ် တီတီ တွတ်တွတ် များ ခင်ဗျာ ဘာကြောင့်၀င်လို့မရတာတုန်း ... ပြောကြပါအုန်းဗျာ ...
အဲဒါကတော့ Pfingo Server ဘက်က Error မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ ....
အဲလို ဖြစ်ရခြင်းကတော့ ... မိမိကွန်ပျူတာ (သို့ ) သက်ဆိုင်သောဆာဗာ မှ Cache လုပ်ထားခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ် ...
ကျွန်တော် ပြောထားတယ်နော် သက်ဆိုင်သော ကွန်ပျုတာ / ဆာဗာ ဘက်ကအမှားအယွင်းနော် ....
စာကို သေသေချာချာ ဖတ်နော် ... ပီးမှ သေသေချာချာလဲ မပြောဘူးလို့တော့ မပြောနဲ့နော် ပွင့်လင်းလွန်း အားကြီးရင် ကိုယ်ပါ ပွင့်သွားမှာမို့လို့ပါဗျာ ...
အဲတော့ မိတ်ဆွေများ အားလုံး လုပ်ရမှာကတော့ ကိုယ့် ကွန်ပျုတာ Network နဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ computer / Router / Server / Client /
wifi phone , ရှိရှိသမျှသော စက် အနန်ဒ အပေါင်းကို Restart လုပ်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ... UPS မပါဘူးနော်.. ဟီး ဟီး
ကျွန်တော်ပြောထားတယ်နော် ... ဒီစာထဲမှာ အကုန်ပါပီးသား ... နည်းနည်းလေး တော့ ဉာဏ်စိုက်သုံးကြပါဗျာ .... သက်ဆိုင်ရာ အကုန်လုံးကို Restart ချရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ..
ဒါဆိုရင် အိုကေမှာ ဆိုပြေပီနော် ... ကျွန်တော့် အကောင့် အကုန်လုံး LOCK ကျနေတာ .. ခုတော့ အကုန်လုံး အဆင်ပြေသွားပါပီ ....
ချလိုက်ကြစို့ သူငယ်ချင်း ***** R E S R A R T ***** အားလုံးသော မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများ အဆင်ပြေနိုင်ကြပါစေ ...
သာဓု သာဓု သာဓု ...
ဒီပိုစ် လေးကို http://mmitknowledge.org/index.php/topic,75.msg133/topicseen.html#msg133 က တွေ့လို့ Share လုပ်လိုက်တာပါ